Uyini ummeli? | Ukwakheka nezifundo
UMaria Jose Roldan | 21/05/2021 12:00 | IYunivesithi
Bambalwa kakhulu abantu abakwazi ukuhlukanisa ukuthi ummeli uyini kummeli. Isibalo sommeli asaziwa kangako emphakathini jikelele, yize sinokubaluleka okufanayo nommeli. Nobabili niyabambisana ukuze impikiswano okukhulunywa ngayo iqhubeke kahle.
Esihlokweni esilandelayo sizokusiza ukuze kusukela manje wazi ukuthi ungummeli futhi iyini imisebenzi yayo emkhakheni wezobulungiswa.
1 Uyini ummeli
2 Lapho kudingeka khona ummeli
3 Uhluke kanjani ummeli kummeli?
4 Imisebenzi yommeli
5 Imisebenzi yommeli
Ummeli uneziqu zoMthetho futhi nguyena omele umuntu noma inkampani phambi kwenkantolo. Ummeli ugxile egatsheni lezomthetho njengomthetho wenqubo. Isethulo esenziwe ngummeli senziwa ngenxa yamandla ommeli atholwe kummeli olungisa izivumelwano.
Ngenxa yobukhona bommeli, kuqinisekisiwe ukuthi isahlulelo okukhulunywa ngaso sizosekelwa kwilungelo njengokulingana kwamaqembu. Isibalo somshushisi sibaluleke kakhulu futhi sibalulekile kangangokuba ngaphandle kobukhona obufanayo ngeke sikwazi ukuqala isinqumo esithile.
Lapho kudingeka khona ummeli
Ummeli kufanele abekhona ngendlela ephoqelekile kunoma yikuphi ukuphikisana komphakathi. Ukubheka lokhu, isibalo sommeli sinezibopho eziningi:
Kufanele uhlanganyele ngokugcwele nemizimba ephethe.
Vikela futhi umele amaklayenti ahlukene ezidinga izinsizakalo zakho.
Melela amaklayenti isimo sayo somnotho esingasivumeli.
Letha imibhalo efanele kwecala elikumele.
Iklayenti elidinga usizo lwommeli, Ungayidinga ngezindlela ezahlukene noma izindlela:
Kwakhiwa uhlu lwezikhalazo ekolishi labameli.
Ngokuncoma kummeli othembekile.
Inkantolo ehambisanayo idinga ummeli osebenzayo.
Uhluke kanjani ummeli kummeli?
Umehluko ucace bha futhi nokuthi ummeli nguyena ophethe ukuvikela iklayenti lakhe. Endabeni yommeli, ukuzeusebenze njengommeleli wamakhasimende futhi uphethe ukugcina yonke imibhalo edingekayo enkambisweni yamacala. Ummeli uthe akukho lutho ngaphandle kwesibalo seklayenti enkantolo. Ngakolunye uhlangothi, iletha yonke imibhalo enikezwa ngummeli enkantolo ngasikhathi sinye lapho iletha khona izaziso ezihlukile ezivela enkantolo ziye kummeli uqobo.
Nge-cons, isibalo sommeli siphethe ukuvikela izintshisekelo ezahlukahlukene zekhasimende lakhe ngaphambi kwenkantolo. Basebenza ngqo ezinkantolo ezahlukahlukene bese beluleka iklayenti labo ngakho konke okudingekayo ukuze umphumela wamacala kube yinzuzo kakhulu.
Umsebenzi oyinhloko wommeli wukuhlela yonke imibhalo edingekayo esimweni secala elithile. Akuyona into ngaphandle kwesixhumanisi okumele sibe khona phakathi kwenkantolo, iklayenti nommeli. Kuzoba nesibopho samasamanisi ahlukene noma izaziso ezidingekayo enkambisweni efanele yesilingo esithile.
Njengoba ukwazi ukubona nokuqaphela, isibalo sommeli sibalulekile futhi siyisihluthulelo lapho icala elithile lingaqalwa futhi lisebenze ngokuphelele. Ummeli usebenza ngokubambisana nomuntu wommeli maqondana nanoma yiluphi udaba lwemvelo olusemthethweni oludinga ukuba khona kwakho.
Indima yommeli izoncika egatsheni lezomthetho akhethekile kulo. Ummeli onguchwepheshe womthetho wezabasebenzi noma wentela akafani nomunye ogxile emthethweni womshado. Endabeni yommeli, kufanele kuqashelwe ukuthi uchwepheshe kuphela emthethweni wenqubo futhi angamela bobabili abantu nezinkampani.
Ngamafuphi, inani lommeli lingemuva uma liqhathaniswa nelommeli. Kodwa-ke, njengoba ubonile, ummeli uyisihluthulelo uma kuziwa ekuqaliseni inqubo ethile yamacala futhi konke kungasebenza ngokuya ngemithetho. Bobabili ummeli nommeli kumele basebenzisane kunoma yiluphi udaba lwezomthetho oludinga ukuba khona kwabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » IYunivesithi » Uyini ummeli?
Uyini umehluko phakathi kosonhlalonhle nosonhlalakahle?